Turkey: Dad loo xukumay afgambigii dhicisoobay
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa Khamiisti shalay xabsi daa’in ku xakuntay 24 qof oo ku eedeysan in ay lug ku lahaayeen afganbigi dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sannadki 2016-ki.
Garsooraha Maxkamadda Ankara ayaa 17 ka mid ah 24-ka qof ku xakumay xabsi daa’in ay ciqaabtiisu adag tahay, kaddib marki lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ay isku dayeen in ay dilaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Sida ay ku warrantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu, dadka xabsi daa’inka adag lagu xakumay waxaa ka mida ah talyihii hore ee ciidamada cirka Turkiga Akin Ozturk iyo Mehmet Dishli oo ah nin la dhashay safiirka Turkiga ee dalka Netherlands Shaban Dishli.
Sidoo kale dadka xabsi daa’inka ciqaabta adag lagu xakumay waxaa ku jira Ali Yazici oo ah gacanyarihii dhinaca millatariga ee madaxweyne Erdogan.
Maxkamadeynta eedeysanayaashan oo aheyd tii ugu weyneyd tan iyo isku-daygi afganbi, ayaa bishi May ee sannadki 2017-ki kasoo billaabatay maxkamad ku taalla xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee Sincan ee duleedka magaalada caasimadda ah ee Ankara.
Kumanaan ruux ayaa wali xabsiyada ugu jira isku daygi afganbi ee Turkiga ka dhacay sannadki 2016-ki.